China Winter textile lounge Manufacture and Factory |I-Tailong
I-Winter textile lounge
Ehlobo elishisayo, ukuhlala eduze kwamanzi noma ngaphansi komthunzi kuzoba kuhle.Ngenkathi, indawo yokuphumula enethezekile nephumuzayo izobaluleka ngathi ukuze sijabulele isikhathi esinjalo sokuphumula.Indawo yokuphumula yasebusika inketho enhle enohlaka oluqinile noluhlala isikhathi eside, usayizi omkhulu ne-backrest elungisekayo.Ikhwalithi enhle nomuzwa onethezekile wokuhlala noma ukulala phezu kwayo.Futhi kukhanya ngokwanele ukuthi abantu bangayihambisa kunoma yiziphi izindawo abafuna ukuzifaka.
L198 x D75 x H34
Imilenze esekelayo ephumela ngaphandle inikeza ukusekela okugcwele endaweni yokuhlala kanye ne-backrest.Ngenkathi wengeza amashubhu e-aluminium ukuze ubophe imilenze, lokho kwenza wonke umkhiqizo uzinze ngokuphelele futhi uhlale isikhathi eside.
Ngezinto ezinhle kakhulu zamashubhu e-aluminium kanye ne-sling, okuyinto i-tube surface ene-powder yangaphandle, umkhiqizo ungafakwa kunoma yiziphi izindawo ezingaphandle futhi kulula ukusula nokugcina.
PHUMULEKA UKUHLALA NOMA UKUMAMA OKULALA
Kunezikhundla ezi-4 eziguquguqukayo ze-backrest, ubude busuka ku-68cm kuya ku-97cm, okuvumela abantu ukuthi bathole ukuphakama kwabo okunethezekile ngokuvele bamise kabusha ishubhu eliphakamisayo.
* Izindwangu ezisezingeni eliphakeme (1*1 ukwaluka)
* Umbala we-Textile ungenziwa ngokwezifiso
* Dlula i-SGS TEST ngo-2019.
I-Winter Textile Lounge Display
Indawo yesithombe: Foshan,China Isikhathi sokuthatha izithombe: May.2018
Okwedlule: I-Casa textile lounge
Olandelayo: Izwa indawo yokuphumula ye-textile
I-Casa textile lounge
Indawo yokuphumula ye-Ivy D
Indawo yokuphumula ye-textile yaseDublin
Indawo yokuphumula emhlophe qhwa (i-poly wood armrest)